Yiziphi izimpumputhe? Le design yakhelwe ukuvikela ilanga nothuli. Ingabe ucabange ukuthi umbukiso wayo wawuyi-shutter evamile. Vumelana, izimpumputhe kumafasitela zilula ukuzisebenzisa kunedivayisi yakudala, futhi akunzima ukuzinakekela. Akumangalisi ukuthi ziyasetshenziswa kakhulu emahhovisi nasemakhaya.
Izimpumputhe ekhishini. Okuhle futhi okusebenzayo
Yini izishaya zanamuhla ezizuzwa ngamakhethini avamile namakhethini? Izinzuzo ziyabonakala. I-tulle encane ayilondolozi emisebeni yelanga elikhanyayo, kodwa uma ulenga iwindi ngezindwangu ezinzima - lizoba mnyama futhi lithengise egumbini, ngoba, ngaphandle kokukhanya, kuzovimba ukufinyeleleka nokuya emoyeni. Enye into yizimpumputhe - ukugeleza kokukhanya kulawulwa ngokushintsha i-lamellas, engaphazamisi ngokuphelele ukungena kwe-oxygen. Ngaphezu kwalokho, abawutholi noma yikuphi iphunga, amanoni nezinye izidakamizwa ezivela kubo zigezwa kalula, futhi umswakama kanye nokushisa kwamahansi akubalulekile kubo. Abesifazane besifazane babebonga izimpumputhe. Ekhishini ungakhetha imodeli enezingqimba, ebonakalayo kanye neyomqulu. Ngokuqondene nalokhu okuqukethwe - futhi lapha umthengi uhanjiswa ngobubanzi obanzi kunazo zonke: benza ipulasitiki, u-bamboo, i-lamellas yendwangu yembala ehlukahlukene kunazo zonke. Ingabe ufuna into ekhethekile yokuhlelwa kwezithombe nge-original picture, picture or panorama yedolobha.
Izimpumputhe ezivundlile zineklamo ye-laconic futhi zilungile ezindaweni ezincane, ngoba "azibi" isikhala. Abathandi be-style minimalism noma ubuchwepheshe obuphezulu bayofana nokulula kwemigqa nokungabikho kokuziqhenya. Kufanelekile ukukhuluma ngokwehlukana mayelana nezakhiwo zangaphakathi ezingaphakathi, ezifakwe ngaphakathi kwendawo yamafasitela. Ngaphezu kwalokho, ngeke bahlale nendawo eyodwa yesakhiwo endaweni, futhi cishe akunakwenzeka ukuwahambisa. Okukhethwa kukho kuyimpumputhe ekhishini.
Amamodeli afanele angaba nokucutshungulwa kwe-oblique, isimo se-wave, semicircle noma i-zigzag. Izinto ezihlukahlukene, izinto ezibonakalayo kanye nama-shades ikuvumela ukuthi usebenzise amasu akhethekile okuklama, ongeke nje unike iwindi ukubukeka okwesitayela, kodwa futhi ubheke kancane noma uwandise futhi ushintshe nokuma kwegumbi ngokwalo.
Izimpumputhe ekhishini kufanele zibe usizo kakhulu. Kulokhu, amamodeli asepulasitiki ayalungile, kodwa kufanele kuqakatheke ngokukhethekile ikhwalithi yendaba. Kuthibhile - ngokushesha kuyashisa elangeni bese kuphenduka ophuzi. Izimpumputhe zepulasitiki enhle ngeke zilethe inkathazo - aziyesabi ilanga, akukhophunga, akukho deformation. Futhi ukungcola kususwa kalula ngendwangu emanzi, ezimweni ezimbi kakhulu, isisombululo se-soapy sisetshenziswa.
I-Metal iyabonika, njengomthetho, yenziwa ngamalokhi ekhethekile futhi aqinile, ehlanganiswe ngendwangu yokuzivikela okuvikelayo kanye ne-koqweqwe lwawo. Abesabi uketshezi, ukukhanya kwelanga nokushisa okuphezulu. Ukuzinakekela kulula, futhi ngemuva kwepulasitiki. Okungeke kwenzeke - ku-draft, amapuleti wensimbi angakwazi ukulinganisa. Ngendlela, ukufaka izimpumputhe kumafasitela epulasitiki akudingi umzamo omkhulu.
Ama-tissue model, naphezu kokufakelwa okukhethekile, okubenza kubangelwe uthuli nokungcola, akunconywa ekhishini.
Uma izinketho zangaphambilini azihambisani nawe, qaphela izimpumputhe eziningi. Igama labo likhuluma ngokwalo.
Inhlanganisela yepulasitiki neyendwangu, amaphepha ezinsimbi kanye nama-bamboo slats, izinkuni ne-aluminium, ukulingisa izinto ezibizayo kanye namakhethini ahlakaniphile - izinketho eziningi.
Noma kunjalo, ungakhohlwa ukuthi ukuziphatha mhlawumbe kungumgomo obaluleke kakhulu ekukhethweni kwemikhiqizo ehlukahlukene ekhishini, kufaka phakathi izimpumputhe.
Ama-Schemes of two-pipe Ukushisa izinhlelo. Ukufakwa, uxhumano, izindleko zempahla
Senza i-canopy phezu kwevolanda
Isiqephu esisezincwadini yilokho? Ukuthuthukiswa kanye nezici zesakhiwo kulezi zincwadi
Lapho usuku angiqabule? ufunde
Okhilimu depilatory ngoba owesifazane umzimba ubuhle